Download iWomen App to Inspire and to be Inspired
iWomen - စွမ်းရည်မြင့်မားမေ့အင်အားသည် မြန်မာနည်းပညာရှင်အမျိုးသမီးများက မြန်မာကျေးလက် အမျိုးသမီးများအတွက် ရေးဆွဲပေးခဲ့သောအခမဲ့ မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိကျေးရွာများမှ အမျိုးသမီးများကြားအားပေးနှိုးဆော်ရန်နှင့် မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုများ တိုးပွားစေရန်အတွက် ချိတ်ဆက်ပေးထားပြီးရပ်ရွာအကျိုး၊ မိသားစုအကျိုးနေ့စဉ် ထမ်းရွက် ကြရာတွင် လမ်ညွှန်ပြသမှုနှင့် အချင်းချင်းအားပေးမှုများကိုရရှိကာအများယုံကြည်လေးစားသောခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာစေပါလိမ့်မည်။
iWomen ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် UNDP နှင့် မေတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျေးလက်အမျိုးသမီးများကွန်ယက်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ယက်သည် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သောကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအုပ်စု ၂၂၀ဝကျော်ကို ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း၃၁ မြို့နယ်မှ မြို့နယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့များကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂၂၀ဝ၀ ပါဝင်ပါသည်။
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် One Thing I Could Make Happen it Would Be
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးစရာ ကျေးလက်အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကျွန်မမှာ အနွေးထွေးဆုံး
ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့...
၀ူရှူးချန်ပီယန်၊ အ၀တ်အထည် ဒီဇိုင်းပညာ၇ှင် ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ တဖျတ်ဖျတ် လက်နေရမည်
ကျမ အမြင်တော့ ရုန်းကန်နေကြတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ ရောက်နေကြတဲ့ နေရာ ကိုယ်စီမှာ လူသားတိုင်း ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတယ် ...
ဖက်ရှင်တော်လှန်ရေး (Fashion Revolution) တည်ထောင်သူ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း သည် ခရီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
မေတို့ကမ္ဘာ ဥက္ကဌ တခြားသူများအား ကူညီပေးနိုင်သောကြောင့် ရရှိလာသော ပီတိအား ငွေဖြင့် ၀ယ်၍မရနိုင်ပါ
ကျွန်မသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ စုစည်းအားမာန်မြို့နယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဒေါ်ချိုအေး ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ...
တည်ထောင်သူနှင့် ဒါရီုက်တာ အခရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရိုးသားစွာကူညီကြပါစို့
ကျမဟာသာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ အရှက်အကြောက်ကြီးတယ်။ သိမ်ငယ်တတ် တဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရိုးစင်းတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုကို မသိသေးတဲ့ အချိန်အထိပေါ့ ...
သရုပ်ဆောင်၊ ပန်းချီဆရာနှင့် ကထိက သင့်ကိုယ်သင် စောင့်ရှောက်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ချစ်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်မှ မချစ်နိုင်လျှင် အခြားသူများကို မည်သို့ ချစ်နိုင်မည်နည်း
မေတို့ကမ္ဘာ ဦးဆောင်ကော်မတီ ကျွန်မသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ အင်းစိမ်းမေလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီမှုအသင်းမှ ညိုညိုစမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မသည် အဖွဲ့ကိုယ်စားဤစာကိုရေးသားခွင့်ရသည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ မိပါသည်။ ကျွန်မသည် အင်းစိမ်းမေ...
စူးစမ်းလေ့လာသူနှင့် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး ဟောပြောသူ မိမိကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားသော ဘ၀လမ်းကို ရဲရဲလျှောက်လှမ်းပါ
ချစ်လှစွာသော မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများရှင်။
အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဟာ ကြီးကျယ်တဲ့ အရာတွေကို...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ယူနှိုက်တက်ကင်းဒမ်း ချစ်ခင်ရပါသော မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများရှင် သင်တို့ကိုစကားပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ရောသင်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ခွင့် ပေးတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ ကျွန်မဟာ နေပြည်တော်မှာ တစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါ...
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင် ဝေဝေ ပလေ့စ် ပိုင်ရှင် ရှမ်းတောင်တန်းမှသည် ခရီးသွားအကြံပေးသူ အဖြစ်သို့
သိပ္ပံပညာရှင် ကျားတွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ စိတ်ကူုးထက်သန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ
သင်တို့နဲ့ ယခုလို စကားပြောခွင့်ဖို့ ရတဲ့အတွက် ကျွန်မ အလွန်ပဲ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
မေတို့ကမ္ဘာဦးဆောင်ကော်မတီ ကျွန်မတို့၏ မေတို့ကမ္ဘာကွန်ယက်သို့ ချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်ကြရန် အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
မေတို့ကမ္ဘာ ဦးဆောင်ကော်မတီ မေတို့ကမ္ဘာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျေးလက်အမျိုးသမီးကွန်ယက်၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရခြင်းအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါသည်
ကျွန်မသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်ရှိ မေ့အားမာန် မြို့နယ် ... ပိုမို ဖတ်ရှုရန်
အနုပညာရှင် ၊ဒီဇိုင်နာ ၊သမိုင်းသုတေသီ Letter To My Sister
ညီမငယ်ရဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှေိ နတ်ဲအခြားလူတွေ ဘယ်လိုပဲထင်ထင် အစ်မရဲ့စိတ် ထဲမှာတော် ညီမငယ်က လှနေတယ၊် ဒါပေမယ်လို့ စိတ်အလှ ကတော် အတည်မြဲဆုံးအလှမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ...
မေတို့ကမ္ဘာ ဦးဆောင်ကော်မတီ ကျွန်မရဲ့ အဖွဲ့အတွင်းမှ အမျိုးသမီးများကို ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးပေးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့ သင်ယူခဲ့ရပါတယ်
ကျွန်မသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် “စိမ်းလဲ့ဧရာ” ကျေးလက်ဒေသလူမှုဖံ...
ပိုမိုများပြားသော စွမ်းရည်ဖြည့် စာများကို iWomen App တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေတို့ကမ္ဘာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျေးလက်အမျိုးသမီးများ ကွန်ရက် ဒေါ်ချိုအေး ဥက္ကဌမေတို့ကမ္ဘာ ဒေါက်တာ မြမြသက် ဘာသာပြန်သူ Allison Moore စီမံကိန်း ကျွမ်းကျင်အရာရှိUNDP Myanmar Eleonora Gatti တည်ထောင်သူ Great Women Speak Out ခင်စန္ဒာဝင်းမိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ရေးသားသူ စောမိုင်ကယ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးသားသူ ထက်ဆုဝေ ဒီဇိုင်နာ ဂျွတ်စ်ပုံဆွဲသူများအဖွဲ့ အေးအေးမော်စေတနာ့ဝန်ထမ်း အေးနှင်းခိုင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကတ္တီပါအောင်မျိုးဟန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခိုင်လွင်မြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း နွယ်လေး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝင်းမာခိုင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝေလင်းမောင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လဲ့ယဉ်ဝင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း လမင်းဖြူဖြူစေတနာ့ဝန်ထမ်း ခင်စုလင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံ
Success! Thank you very much, we will reply very soon.
i-Women - Inspiring Women app, getting inspired by Zwegabin
i-Women Inspiring Women Application Journey, Yangon Teach
girls meets Rural Kyaiklat Women
© 2016 Copy right iWomen Mobile Application Myanmar